Maxaabiista Tigreey ay Qabatay…Ma Ku Jiraan Soomaali? | Xaqiiqonews
Maxaabiista Tigreey ay Qabatay…Ma Ku Jiraan Soomaali?
Hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay soo bandhigI doonaan dhawaan maxaabiis ka tirsaneyd waxa uu ku sifeeyey “huwanta ku soo duulay shacabka Tigreey”.
Hadalka hogaamiyaha jabhadda xoreynta shacabka Tigreey ayaa imaanaya xilli hay’daha qaramada midoobay ay walaac ka muujinayaan xaaladda ban’aadanimo ee ka taagan Itoobiya, taasi oo ka dhalatay dagaalada ka bilowday gobolka Tigreey.
” kuwii beenta sheegayay ee lahaa majiro xoog dibadeed oo dagaalka ku jira, waxaan tusi doonaa maxaabista aan ku qabbanay dagaalka” ,ayuu yiri Debretsion oo intaasi ku daray in caddeymahan iyo kuwa kale oo dheeraad ahba ay dunida iyo ururada caalamiga ah u soo bandhigi doonaan.
Hogaamiyaha TPlF ma uusan xusin qowmiyadaha ay ka tirsan yihiin maxaabiista ay gacanta ku hayaan, isaga oo ku gaabsaday in ay soo bandhagi doonaan.
Hogaamiyaha ayaaa ku eedeeyey madaxweynaha Ereteriya in uu kala qeybiyey dalkiisa, haddana uu rabo in uu kala qeybiyo Itoobiya – sida uu hadalka u dhigay.
Dagaalka gobolka Tigreey aya galay todobaadkiisii labaad, dowladda Itoobiya oo kaalmo ka heleysa ismaamulada Amxaarada iyo Soomaalida ayaa gobolka Tigreey ku qaaday dagaal ba’an oo dhul iyo cir ah.
Dhanka kale, ciidamo Eretriyaan ah ayaa ka soo gudbay xadka iyagoo qeyb ka ah dagaalka lagu qaaday gobolka Tigreey.